Ambadika politika… ambadika sy ambadika | NewsMada
Ambadika politika… ambadika sy ambadika
Inona marina ny fototr’izao raharaham-pirenena misaritaka izao? Eo ny amin’ny lalàm-pifidianana amboletra nolanina tamin’ny kolikoly. Tsy inona fa karazana pitik’afo nampirongatra ny fitakiana ranolava ny fametraham-pialan’ny filohan’ny Repoblika. Efa niotrika ela ny alahelom-bahoaka noho ny famoretana, fanampenam-bava, famadihana ny vahoaka amin’ny tsy fanajana ny teny nomena…
Tsy izay lalàm-pifidianana intsony izany ny olana, fa ny fifandraisana eo amin’ny vahoaka sy ny mpitondra: tsy misy izay fifampitokisana. Efa niotrika ela koa izay, fa izao vao tena mirongatra, rano vaky, afa-patotra. Izao koa vao tena sahy mamoaka ny alahelony sy ny hetahetany lalina ny tsirairay sy ny daholobe mitambatra. Tsy inona fa fahatofohana, fahatapahan-kevitra ho amin’ny fanovana.
Inona no afitsoky ny mpitondra amin’ny hoe mba vahaolana? Eo, ohatra, ny fandrahonana amin’ny hoe fampiharan-dalàna eto an-toerana amin’izay lazaina ho manakorontana sy manongam-panjakana; ny fampihorohoroana amin’ny fisamborana ireo mpitarika ny hetsika, araka ny resaka mandeha; ny fampizarazarana hanjakana hoe tsy mahazo manao hetsika an-dalambe ny any amin’ny faritany…
Amin’izany, mampihazakazaka ny fiandrandrana ny fanelanelanan’ny fiombonambe iraisam-pirenena hamaha olana sy hanohana, ny fiandrandrana fifampidinihan’ny samy Malagasy eto an-toerana, ny fiantsoana ny rehetra samy ho tony… Tsy vitan’izany, nasondrotra 8% tampoka ny karaman’ny mpiasam-panjakana, na 15 % aza no voasoratra amin’ny tetibolam-panjakana; misy ny vary amidy mora eny ifotony …
Inona avokoa izany rehetra? Heverina hahavaha olana, na hampitony ahay ny fahoriana sy ny alahelo ary ny hatezeram-bahoaka… Nahoana no tsy fantatra sy tsy natao izany izay ela izay? Fampiatoana sy famaranana ny hetsi-bahoaka no zava-dehibe sy mahamaika? Tsy inona fa fanohizana ny fitondrana sitrany ahay: ambadika politika… ambadika sy ambadika, na izay afenina na ny aseho. Fanta-bahoaka?